Izixhobo Zetekhnoloji | Eyekhala 2022
Eyona midlalo ilungileyo yeNintendo yokuTshintsha ngoLwesihlanu
Ngemodeli entsha esendleleni, siqinisekile ukuba kuya kubakho izivumelwano ezininzi kwiNintendo switch kunye noTshintsho lweLite, kunye neebundles, ngalo Lwesihlanu umnyama.
Ukuthengisa okona kubalaseleyo ngemini yamanqindi 2020 UK: ezona zithembiso zibalaseleyo zokubonelela nge-UK ziya bukhoma
Eyona Ntengiso yeBhokisi yamanqindi ye2020 UK: ezi zezona zintengiselwano zibalaseleyo, izibonelelo kunye neebargains ezivela kwiimveliso ezinje ngoJohn Lewis kunye neAmazon kwintengiso yoSuku lomdlalo wamanqindi kulo nyaka.
NgoLwesihlanu omnyama 2021: umhla walo nyaka kunye nezivumelwano ezilindelekileyo
Olona tshintsho luphantsi lweNintendo switch, iNintendo switch kunye neJoy-Con. Fumana elona xabiso libalaseleyo ngokuTshintsha ngoku.
Eyona misebenzi mihle yangoMvulo weFitbit: ithuba lokugqibela lokugcina iipesenti ezili-10 kwiVersa 3 nakwiFitbit Sense
Ezi zezona zintengiso zeCyber ​​ngoMvulo kwiFitbits. Fumana amaxabiso asezantsi kunye nolondolozo olukhulu kwiFitbit Versa 3 entsha, iSense kunye nokunye.
Eyona ntengiso yeAmazon TV Stick ijongene noJulayi 2021
Eyona intengiso yeAmazon Fire TV Stick ngoku inikezela ngengcebiso, i-HD kunye ne-4K esemgangathweni yokusasaza kwaye yeyiphi ekufuneka uyithengile.
Eyona ntengiso yeTV ilungileyo ngoJulayi 2021: nyusa ukuseta kwakho
Ngaba ujonge iTV enkulu ngexabiso eliphantsi? Nazi ezona ntengiso zibalaseleyo zeTV oza kuzifumana kule nyanga, kubandakanya i4K, QLED, NanoCell kunye neOLED.
Isivumelwano seSky Cyber ​​ngoMvulo 2020: izibonelelo ziyaqhubeka namhlanje kwi-Sky Q, Sky Sports kunye ne-Broadband
Fumana ezona Sky TV zibalaseleyo, ibhendi ebanzi kunye neentengiselwano eziphathwayo zoLwesihlanu oMnyama kunye noMvulo weCyber ​​kubandakanya i-Sky Q, i-Sky Cinema kunye neephakeji zeMidlalo yeSky.
NGOKU kweTV ye-cyber ngoMvulo we-2020 ukuthengiswa kubandakanya ukonga okukhulu kwii-Smart Sticks, ukupasa kunye ne-Broadband
NGOKU umabonwakude we-Cyber ​​ngoMvulo ujongana nokunikezelwa nge-TV YAMANJE kwibhokisi ye-TV yangoku kunye nokudlula kunye ne-Broadband.
Eyona ntengiso igqibeleleyo ukusuka esiphelweni seAmazon seNtengiso yehlobo 2020
ICarphone Warehouse Black ngoLwesihlanu kunye neCyber ​​ngoMvulo 2020: fumana i-60GB yedatha (endaweni ye-6GB) kwi-iPhone 11 ngesivumelwano samva nje
Isikhokelo sakho kweyona ndawo ibalaseleyo yokugcina indawo ekuthiwa yiCarphone Warehouse ngoLwesihlanu omnyama ngo-2020. Umthengisi okwangoku unikezela nge-60GB yedatha kwi-iPhone 11 ye- $ 30 ngenyanga.
Eyona Nintendo yoTshintsho lweCyber ​​ngoMvulo ijongene ne2020: izibonelelo zangoku zokuphila kunye nemidlalo, kunye nokuhlaziywa kwesitokhwe
Ngaba ujonga isivumelwano seNintendo Shintsha kwisitokhwe? Olu lolona tshintsho lubalaseleyo lokujongana neMvulo.
I-Nintendo switch ye-Free kunye nee-AirPods njengeVirgin Media inikezela ngeyona fowuni izezona zinto zihamba kakuhle ngalo Lwesihlanu umnyama nangoMvulo we-cyber
Sidwelise zonke ezona zintengiso zeVirgin Media Black ngoLwesihlanu ngaphambi komhla wentengiso. Jonga ukonga kakhulu kwi-broadband, i-TV, iimuvi kunye nezemidlalo.
Eyona misebenzi ilungileyo yePS4 kunye nePS4 Pro Cyber ​​yangoMvulo 2020: Ukunikezelwa kwanamhlanje kwimidlalo yePS4 kunye neebundles
Fumana ezona zintengiso zePS4 zaMnyama ngoLwesihlanu kunye neCyber ​​Monday, iPS4 Slim, iPS4 Pro, iVR kunye nezona zinexabiso eliphantsi zePS4 ezikhoyo ngoku.
Eyona misebenzi mihle yasekhaya kuGoogle ngoJulayi 2021
Eyona mizi mihle yaseKhaya kuGoogle ngoku inikezela ngengcebiso kwizithethi ezikrelekrele, umgangatho wesandi, uyilo kunye nexabiso lemali.
Ukuthengiswa kweSamsung Black ngoLwesihlanu: ukubonelela kwangoko kwiGlass Watch kunye neefowuni
Amaxabiso aphantsi kunye nezaphulelo kwiimveliso ezahlukeneyo ze-Samsung, kubandakanya iGlass Watch, ii-smartphones kunye nokunye.
NgoLwesihlanu omnyama i-EE kunye neCyber ​​ngoMvulo zijongana ne-2020: I-AirPod yasimahla, ukutshintsha kwesimahla kweNintendo, iinyanda zeTV kunye neefowuni ezingabizi
Eyona EE Cyber ​​yangoMvulo ijongene nokuthengiswa kweNtsundu ngoLwesihlanu. Ugcino olukhulu kwii-iPhones kunye nakwiikhontrakthi zeSamsung zeSamsung, kunye nezivumelwano zeSIM kuphela.
Eyona misebenzi mihle yeAmazon Echo kaJulayi 2021
Fumana ezona zintengiso zeAmazon Echo ekunikezelweni ngoku. Lindela ukujongana ne-Echo Dot entsha, iinyanda zePhilips Hue kunye nokunye.
Eyona misebenzi ilungileyo yeCurrys Cyber ​​yangoMvulo ye2020: iiTV zeSamsung, iiShark vacuums kunye nokunye
Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-60 kwintengiso yeCurrys Cyber ​​yangoMvulo kubandakanya iiFitbits, iilaptops, izithethi nokunye. Sifumene ezona zintengiso zisesitokhwe kwiCurrys.
NGOKU umabonwakude uphehlelela umnikelo weSky Cinema weenyanga ezintandathu nge- $ 49.99 kuphela
Binge-bukela iiseti zebhokisi oyithandayo kunye neefilimu ezingaphantsi- ukuba ungazifumana njani izandla zakho kwinyanga ezintandathu NGOKU kwi-TV yeSky Cinema kunye nokuzonwabisa ukudlula nge-60% isaphulelo
imidlalo yebhola ekhatywayo yosuku lonyaka omtsha
indlela yokususa i-hickey entanyeni
i-pixie esikwe ngobuso obumbhoxo
ingelosi amanani 444 intsingiselo
ezona filim ziyoyikekayo kwiNetflix